အရေးကြီးသတင်း (သူငယ်ချင်းများအတွက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အရေးကြီးသတင်း (သူငယ်ချင်းများအတွက်)
Posted by mG on Jun 15, 2011 in Copy/Paste | 16 comments
အားလုံးသော အွန်လိုင်းမှ သူငယ်ချင်းများ၊ကျွန်တော် ဒီစာကို ကျွန်တော့မေးလ်ကနေ..Forward ရလာတာပါ။ဒါလေးကိုဖတ်မိတိုင်း အရမ်းကို
ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ပါစေ။ ။
ဒီသတင်းလေး ကြားမိတာ ၂နှစ်လောက် ရှိမယ် ထင်တယ်။
ဒါက အင်ကြီး ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
အော်…. ဘာများလဲလို့ …….အဲဒါမျိုးတွေကကြာပါပြီ။
ဒီပိုစ့်ပါ ရွှေတိဂုံကိစ္စကို အတိအကျမပြောနိုင်ပေမယ့်..
အလားတူကိစ္စပေါင်းများစွာ.. ဆင်တူရိုးမှားကိစ္စပေါင်းများစွာ ..
သာသနာတော်ကို သန့်စင်စေချင်သူတွေများလာတဲ့အခါ အဲဒါတွေကို ထုတ်ပြော ပြုပြင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီသတင်းသာ မှန်ကန်ခဲ့ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာလူမျိုး ( သို့ မဟုတ် ) ဗမာ လူမျိုး များ အနေဖြင့် လုံးဝ ခွင့်လွှတ်သည်းခံ နိုင်ရန်မရှိပါ ။ mG ခင်ဗျား သည်သတင်းကို အစိုးရပိုင်းထံ ထိ အမြန်ဆုံး ပေးပို့ စေလို ပါသည် ခင်ဗျား ။ သူကြီး ရေ စုံစမ်း စစ်ဆေး ပေးပါဦးဗျ
ဒီသတင်းက အမှန်လို့တဆင့်စကားနဲ့ ကြားဖူးတယ်…တဆင့်စကားဆိုတာက ဘုရားဝန်ထမ်းတွေဆီကပါ…ဒါပေမယ့် လေလံသဘောနဲ့ ပေးတာဆိုတော့ တဦးတယောက်တည်းတော့ ပုံမှန် မဟုတ်ဘူးထင်တယ်..ပိုပေးနိုင်တဲ့ သူက ၇တာတဲ့….နောက်ပြီးကြားဖူးတာတခုရှိသေးတယ်…ဘုရားပေါ်ကနေ ဆင်းလာတဲ့ေ၇တွေကို နေရာတခုမှာ filter တွေနဲ့စစ်ထားပြီးတော့ အနည်တွေမှာ ပါလာတဲ့ ရွှေမှုန်တွေကို လေလံသဘောမျိုးနဲ့ပဲ ပြန်ရောင်းတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်…
ဒီလိုမျိုး စွန့်ပစ် ပစ္စည်း ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကို အသုံးချတက်တဲ့ သူတွေကို ရောင်းချလိုက်ပြီး ရလာတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ဘုရာ အတွက် ပြန် သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လျှော်တယ်လို ထင်ပါတယ်…
ဒီသတင်းထွက်တာ ကြာပါပြီ။ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ကလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းတာတွေ့ဖူးပါတယ်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုတော့ တိတိကျကျ ပြောရန်ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းငြိမ်သွားလို့ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရဲ့ ဘဏ်အပ်နှံငွေ တွေကိုတော့ အစိုးရကမကြာခဏ ချေးယူသုံးစွဲလေ့ရှိတယ်လို့တော့ အတွင်းသတင်းရှိတယ်။ ဘတ်ဂျတ်လိုငွေပြတဲ့ အခါတွေမှာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ အစိုးရကပဲလား၊ ရန်ကုန်စည်ပင်မြို့ သာယာရေးအဖွဲ့ကပဲလား မသိပါဘူး။ ထူးတော့မထူးပါဘူးလေ အတူတူနဲ့ အနူနူပဲဟာ….
ဆူးလေဘုရားမှာကပ်ထားတဲ့တင်ဒါခေါ်စာတစ်ခုကိုတော့ဖတ်ဘူးတယ်။ တင်ဒါတင်သွင်းသူဟာ ဗုတ်ဒဘာသာ၊ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းချက်ပါတယ်။ ရွှေတီဂုံမှာတော့ဘယ်လိုစည်းကမ်းချက်ရှိလည်းမသိဘူး။
ဟုတ်တယ် ဒီသတင်းကြားတာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိပါဘူး။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပတ်ဝန်းကျင်က ဘုရားတွေမှာလဲ ဒီလိုပဲ ကန်ထရိုက်တွေပေးတယ်လို့လဲ ကြားဖူးပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ဆိုက်ထဲမှာ တခြားလူတွေ တင်တာ နှစ်ခါ ၊ သုံးခါ ။ ရှိပြီ ကြာတောင် ကြာနေပြီ။
ကိုယ်ကတော့ ဘုရားကို ကြည်ညိုလို့ လှူ လိုက်တာပဲလေ … ကန်ထရိုက်ယူတာ မယူတာ သူတို့ အပိုင်းပဲ … ရိုးရိုးလေးပဲ တွေးလိုက်ပါ ။
ဒီသတင်းကို ကြားဖူးတာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ .. သတင်းက အမှန်လို့လဲပြောကြပါတယ် .. သတမ်းမှန်တာ မမှန်တာထက် ကိုယ်ဘုရားကို လှူတဲ့အခါ စိတ်သန့်သန့်နဲ့ လှူဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်
ဟုတ်တယ် .. အဲအဲ ဟုတ်တယ်ဆိုတာ ဒီသတင်းကြာပြီလို့ပြောတာ ဒါက အမှန်မဟုတ်လောက်ပါဘူး…..နောင်နောင်ပြောသလို ဘူရားပေါ်က စီးကြလာတဲ့ ရေမြောင်း တလျှောက် လေလံပြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်.. ကျိုက်ထီးရိုး တောင်ပေါ် စေတီ သေးသေးလေးတွေမှာ ကိုယ်တွေ့လေးတခုပါ . ခေါင်းလောင်း လိုအပ်နေလို့ ၀ယ်ပြီးလူု ခဲ့တယ် ပြီးတော့ေ၇တွက်ကြည့်တော့ ၅ လုံးပဲရှိသေးတယ်.. ဒါနဲ့ နောက်တခေါက်ကြမှ လူုမယ်လေဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့တယ် တပတ်တောင် မပြည့်သေးဘူး လူုမလို့ သွားကြည့်တော့ ၃လုံးပဲရှိတယ် တိုးမလာတဲ့အပြင်လျှော့တောင်သွားသေးတယ် ..လေလံပြစ်တယ် ပြောတာပဲ ဘုရားပေါ်က လူတွေက ..အလူုခံ တဲ့သူတွေက တော့ အတင်းကြီးကို အလူုခံနေကြတာပဲ……….
စေတနာသုံးတန်ပြတ်သားစွာဖြင့်လှူတန်းပါ။ဘုရားကိုကြည်ညိုလို့ လှူတာလှူပြီးတဲ့ နောက်ဘာမှမတွေးနဲ့ 
အဲလိုတွေးရင်းနဲ့ လှူရင်လည်းမပြတ်ဘူး။ကြည့် သောသူမြင်ရသည်။မြင်ရတဲ့ သူခံစားရသည်။ကြားရသည့် 
လှူရာမှာ… “ငါ့လက်ကလွတ် ဗြွတ်”ဆိုပြီးတော့ မလှူရပါဘူး..။
မြန်မာပြည်မှာ ငတ်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်..။ ဘ၀ပျက်နေတဲ့..မိန်းကလေးတွေရှိတယ်..။
ခြေလက်တွေပြတ်နေတဲ့.. ဒုက္ခိတတွေရှိတယ်..။ စာသင်ချင်ရက် ကျောင်းမတက်ရဖြစ်နေတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေရှိတယ်..။
နောင် တိုင်းပြည်ကြီးကို သူတို့လက်အပ်ရမှာ…။ နောင်အနာဂါတ်ရဲ့..အမျိုး..ဘာသာ..သာသနာကို စောင့်ရှောင့်မှာက..သူတို့တွေ…။
သူတို့ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးမဲ့နေရာကို လှူပါ..။ ငွေကိုစံနစ်တကျသုံးပါ..။ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ..။
အဲဒါမျိုး.. အလှူကို.. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် သာဓုခေါ်ပါတယ်..။
တကမ္ဘာလုံးက လူသားတွေ..ဘာသာမရွေး..လူမျိုးမရွေး သာဓုခေါ်ပါတယ်..။
အံ့ဘွယ်သုတပဲ။ အလှူခံပုံးကိုတောင် လေလံတင်ရတယ်လို့။ ဘာတွေကိုများ ဆက်ပြီးလေလံတင်ဦးမလဲးမသိဘူး။ကြာရကြားရ နားဝမသက်သာလိုက်တာ။